Malagasy guitar masters: hisehatra sy hizara traikefa atsy La Réunion | NewsMada
Malagasy guitar masters: hisehatra sy hizara traikefa atsy La Réunion
Par Taratra sur 13/10/2018
Azo lazaina ho tarika iray miavaka ary mahita fahombiazana amin’izay mampisongadina azy amin’ny hafa izay ny Malagasy guitar masters, ahitana an’i Teta, i Chrysanto Zama ary i Rija Randrianivosoa, misolo an’i Joël Rabesolo, araka ny hita ao amin’ny pejy tambajotran-tserasera an’ny tarika.
Hihazo ny Nosy La Réunion izy telo mirahalahy, amin’ny faran’io herinandro ho avy io. Hatevina ny fandaharam-potoan’izy ireo, mandritra ity fitsidihana ity, satria hisy ny atrikasa, na fampianarana mitendry gitara, hotanterahin’izy ireo, ny 19 hatramin’ny 24 oktobra, ao amin’ny Théâtre les bambous ao Saint-Benoît.
Tsy vitsy ireo mahafehy ity zavamaneno ity, saingy anisan’ny hozarain’ny tarika Malagasy guitar masters ny fitendrena ny gadona malagasy amin’ny gitara. Aorian’ny atrikasa, ny 27 oktobra, kosa ny fotoana amin’izy ireo amin’ny fampisehoana an-tsehatra, hotanterahina ao Saint-Benoît ihany.